SHARIIF XASAN OO SHEEGAY INAY TAAGEERSAN YIHIIN NIDAAMKA 4.5 ILAA DADKA SOMALIYED TIRO KOOB RASMI AH LAGU SAMEEYO - shumis.net
→ SHARIIF XASAN OO SHEEGAY INAY TAAGEERSAN YIHIIN NIDAAMKA 4.5 ILAA DADKA SOMALIYED TIRO KOOB RASMI AH LAGU SAMEEYO SHARIIF XASAN OO SHEEGAY INAY TAAGEERSAN YIHIIN NIDAAMKA 4.5 ILAA DADKA SOMALIYED TIRO KOOB RASMI AH LAGU SAMEEYO galmada Net
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa sheegay inay taageersan yihiin Ka maamul ahaan Hanaanka 4.5 oo inta badan Somalida xilalka Siyaasadeed ay wax ku qaybsadaan.
Isaga oo Saxaafadda kula hadlaayay magaalada Baydhabo, kadib ku noqoshadiisa Magaalada ayaa Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed waxa uu tilmaamay in ilaa inta Somalida laga soo tirinaayo ay doonayaan 4.5.
Shacabka Koonfur Galbeed ayuu sheegay inay yihiin Shacab Jecel nabadda iyo isdhexgalka Bulshada, iyaga oo aad u qiimaya ayuu yiri Deris wanaaga.
“Shacabka Koonfur Galbeed waa kuwo jecel nabadda, is dhexgalka, wada deganaanshiyaha iyo isku duubnida shacabka Soomaaliyeed, hadaba anaga waxaan taageersanahay in illaa Soomaalida laga tiranayo aan laga gudbin nidaamka 4.5” ayuu yiri Shariif Xasan .
Dhinaca kale Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, ayaa uga tacsiyadeeyay Dowladda Kenya askartii kaga dhimatay weerarkii ka dhacay Degmada Ceelcadde ee Gobolka Gedo.
Shariif Xasan ayaa hadalkaan ka sheegay Xilli uu Saxaafadda kula hadlaayay Magaalada Baydhabo oo uu ka warbixinaayay natiijada Shirkii Kismaayo ee fashilka ku soo dhamaaday.